ဒိုးမယ် - Page 35 of 39 - နေရာသစ်များကို ရှာဖွေကြပါစို့!
စမ်းချောင်းဆိုတာ အစားအသောက်ကောင်း ချစ်သူတွေအတွက် အစားအသောက်ကောင်းများစွာကို ရ ရှိနိုင်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နာမည် ကျော်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတခါမှာတော့ စျေးနှုန်းသင့်တင့်ပြီး တကယ်ကို ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ Cafe & Bar တစ်ခုကို “Doemal” အဖွဲ့ က မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဂျပန်...
အနောက်တိုင်း စားသောက်ဆိုင်မှာ စမတ်ကျကျ ဘယ်လိုစားကြမလဲ။
အစားအစာတွေကို ဘယ်လို စတိုင်ကျကျနဲ့ စားသုံးရမလဲဆိုတာ အခုခေတ်မှာ ပိုမို အရေးကြီးလာပါတယ်။ အလုပ်အင်တာဗျူးတွေ၊ မိတ်ဆုံစားပွဲတွေနှင့် ညစာစားပွဲတွေ အများစုကို စားသောက်ဆိုင်တော်တော်များများမှာ ပြုလုပ်ဆွေးနွေးလာကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အနောက်တိုင်း စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ပိုမို ပြုလုပ်လာကြတာကြောင့် အနောက်တိုင်းအစားအစာတွေကို စတိုင်ကျကျ ဟန်ပါပါ နှင့်...
သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအင်ကို ပိုမို တိုးပွားစေမယ့် အစားအသောက်များ
တစ်နေ့တစ်နေ့ သွားလာလှုပ်ရှားနေရတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်မှာ စွမ်းအင်တွေ ကုန်ခမ်းသွားပါတယ်။ ဒီလိုကုန်ခမ်းသွားတဲ့ စွမ်းအင်တွေကို အစားအသောက်ကနေ ပြန်လည် ဖြည့်တင်းတဲ့အတွက် ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေက ဘယ်လိုဓာတ်တွေ ဖြည့်တင်းပေးနိုင်လည်းဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ပျားရည် ပျားရည်တစ်ဇွန်းက အားဖြည့်အချိုရည်တစ်ဘူးစာနဲ့ ညီမျှပါတယ်။ သူရဲ့ သဘာဝအချိုဓာတ်က လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေချိန် မာဆယ်တွေကို အားဖြည့်ပေးလို့...
ပါတီမှာ ပျော်ကြမယ်၊ သောက်ကြမယ်။
ပျော်စရာ TGIF နေ့လေးမှာ ဘယ်တွေလုပ်ဖို့ စဉ်းစားထားပါလဲ။ ပျော်စရာ ကောင်းပြီး အပီ ရှိတ်လို့လည်းရ၊ ဘော်ဒါတွေနဲ့လည်း အပြီကဲလို့ရတဲ့ နေရာလေး ဖြစ်တဲ့ ပါတီသွားမယ်ဆိုလည်း ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်တွေထဲမှာ ပါတာပါပဲနော်။ ပါတီဆိုတာက??? ပါတီဆိုတာကတော့ ကိုယ်သိတဲ့ လူတွေနဲ့ရော၊ ကိုယ်မသိတဲ့...
အရသာထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ့ Lasagna ကိုဘယ္လိုျပဳလုပ္ထားပါသလဲ။
အရသာထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ Lasagna ကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ထားပါသလဲ။ အစားအစာတွေကို စားသုံးတယ်ဆိုတာက စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ရာ ကောင်းတဲ့ အရာ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအနှ့ံမှာ ရှိတဲ့ မတူညီတဲ့ အရသာအသစ်အသစ်တွေရှိတဲ့ အစားအစာတွေကနေ မတူညီတဲ့ အရသာတွေနှင့် အတွေ့အကြုံ သစ်တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ အီတလီရဲ့ ရိုးရာ အစားအစာတွေထဲအများကြီးထဲကမှ...
ပေါက်ကံ ညစျေးတန်းသို့ အလည်တစ်ခေါက်။
ဒီနေ့ပြီးလို့ မနက်ဖြန်က ဆိုရင်တော့ အားလုံးကြိုက်နှစ်သက်ပြီး စောင့်မျှော်နေတဲ့ ပျော်စရာ သောကြာနေ့ (TGIF) လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပျော်စရာ ကောင်းလှတဲ့ TGIF လေးမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စုံစုံညီညီ နဲ့ လူတိုင်းရဲ့ အကြိုက်ကို တစ်နေရာထဲမှာ ရရှိနိုင်မယ့် နေရာလေး...